MUSHAHADA LAKULANKA: SAWIR IYO SHARAXAAD KU SAABSAN SIDA LOO QOYNAYO IYO MILIXDA - MUSHROOMS
Qashin khafiif ah ayaa ka fog lumiska dhifka ah, laakiin dhadhanka dhadhanka leh waxay sababtaa aragtida labanlaaban ee wax soo saarka. Ciyaalka reer galbeedku waxay u arkaan in aan la dabooli karin, sida uu qabo buugaagta tixraaca ah, xitaa sunta. Iyo sidoo kale Ruushka iyo Belarus, koobab noocan oo kale ah ayaa loo ururiyaa pickles. Waa maxay funguskan, halka ay ku koraan iyo calaamadaha aan cillad lahayn, calaamad u ah, in loo isticmaali karo ujeedooyin cunto - waxaan ka hadli doonaa marka dambe.
Magaca ciriiriyuhu wuxuu si buuxda u dhigmaa dhadhankiisa. Botanistu waxay tixgeliyaan iyaga oo ah wakiillada qadhaadh ee caanaha xayawaanka. Si kastaba ha ahaatee, tani kama horjoogsanayso dadka jecel in ay aamusnaanta si ay u soo aruuriyaan noocyada noocyada kala duwan ee loo yaqaan "blanches".
Ma taqaanaa? Linguists waxay aaminsan yihiin in erayga "mushroom" laga soo qaatay erayga Old Slavic "gyryb", taas oo macneheedu yahay "hump", oo marka hore uun noocyada noocaas ah waxaa lagu magacaabaa boqoshaada, daboolka kaas oo ah qaab isku mid ah.
Khubarada waxay kuxiran yihiin lifaaqan noocan oo kale ah wakiilkan ee boqreyda musqusha si ay u ballaadhan yihiin oo sare u qaadaan. Sannad kasta, xaaladaha cimilada oo dhan, qaniinyada ayaa si aad u qulqulaya, kaas oo siinaya kalkaaliyayaasha musqusha ee kalsoonida ururinta wanaagsan ee kaynta. Dabcan, marka la barbardhigo boqoshaada cagaarka cagaaran, boqoshaada caanaha iyo boqoshaada kale oo qiimo leh, waxay ku sii jiraan khasaare. Khubarada waxay kuxiraan qadhaadh iyo boqoshaada si caan ah loo cuni karo ee qaybta IV. Tan macnaheedu waa in boqoshaada aan loo isticmaalin qaabkeeda qoyan iyo kuwa la qalajiyey. Inta badan, salting ama marinade waxaa laga sameeyaa walxo ceeriin ah ka dib sameynta.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan boqoshaada boqoshaada: Guryaha waxtarka leh iyo waxyeelada leh, goosashada xilliga qaboobaha; noocyada aspen iyo boqoshaada caanaha madow.
Isku mid ahaanshaha
In ilaha sayniska, meydadka miro ayaa lagu magacaabaa qashin, iyo dadku way yaqaanaan sida:
Waa muhiim! Xannuunku wuxuu si adag uga hortagaa dadka gala boogta dheef-shiidka, xanuujinta, xanuunka fedraalka, beerka beerka, cagaarshowga, cudurada wadnaha iyo cudurrada kalyaha. Sidoo kale, sheyga laguma talinayo carruurta, uurka iyo nuujinta.
Sidee ayuu u egyahay
Noocyo khafiif ah ee muuqaalka waa wax aan caadi ahayn. Hase yeeshee, waxaa jira noocyo badan oo fangaska ah oo ka mid ah nooca caanaha ah, oo ay si fudud u jahwareeraan, markaa aynu eegno calaamadaha dibadda.
Dhexdhexaadkan qaybtan ee fangasku wuxuu ku kala duwanaan karaa 4 ilaa 11 sentimitir. Ugu horreyntii, waxay ku dhacdaa qaab dawan ah, mar dambena waxay noqotaa mid isku mid ah oo jilicsan. Isla mar ahaantaana, tuubbo weyn oo caan ah ayaa si muuqata u muuqata in laga arko bartamaha, taas oo ah calaamad muhiim ah oo ka mid ah kuwa xoqaya. Cirifka daboolka waxaa lagu kala duwan yahay qaabdhismeedkooda iyo qaabka ay u socdaan. Diirka diirka ayaa ah mid sahlan, lebis midab casaan ah oo midab leh, oo leh pubescence yar. Xilliga roobka, miistu waxay noqotaa mid adag oo dhalaalaya.
Ku sii wad inaad ka baxdo aamusnaan, iska ilaali: hubi cuntada la cuni karo (sii kordhaya Maajo iyo dayrta) iyo noocyada sunta ah ee boqoshaada.
Waxaa calaamad u ah cufnaanta wanaagsan, laakiin jilicsan. In boqoshaada dhallinyarada ah, midabka jidhka waa cad-caddaan, iyo kuwa horayba - oo leh yar oo tinge-brown tinge. Maqaarka maqaarku wuxuu had iyo jeer ku hayaa xajka dabka. Meelaha laga soocayo, juice caano aan midab lahayn ayaa si xor ah u qarsoodi ah, kaas oo gubi kara dibnaha iyo marnaba isbeddel midab marka uu u soo baxo oksijiinka. Jirka marar dhif ah ayuu ku dhuftay duufaan, wuxuu leeyahay qaac aad u yar, taas oo badanaa tixgeliya dhibta.
Ma taqaanaa? Qoraaladii hore ee Novgorod qadiimka ah ayaa ka sheekeynaya daaweynta duufaanta la isku qalajiyey.
Waxay leedahay muuqaal cylindrical joogto ah, dherer ilaa ilaa 7 sentimitir iyo midab iftiin ah oo midabyo u eg oo ku habboon. Saldhigga marwalba wuxuu leeyahay duubis duug ah oo ah mycelium. In fangaska yaryar, qaybta hoose ee lugta waa mid adag, halka da'da hore waa meel bannaan. Mararka qaarkood waxay ku jiri kartaa grayish fiilo leh ama midab guduudan.
Marka ay yaryar yihiin, taarikhdu mar kasta waa iftiin, halka kuwa aad u culus ay u noqdaan inay la kulmaan koofida. Marar badan ayaa ku yaal, halkii cidhiidhi ah, oo kor u qaadeysa lugta cylindrical.
Xagee sii kordhaya, goorta la ururinayo
Si aad u soo ururiso koobab qadhaadh, muhiim maahan in la ogaado meelo gaar ah. Waxay ku koraan meel kasta, kaymo kasta, gaar ahaan geedaha iyo birta. Jacayl badan qoyaan leh qoyaan leh carrada carradahalkaas oo maqaarka iyo lichen koraan.
Koobka noocan oo kale ah waxaa laga heli karaa foomka keli ah ama kooxo. Xilliga xagaaga ee fruiting fruiting ka badan oo ka bilowda bilaabmaa Juun iyo soconayaa ilaa bartamihii dayrta. Mararka qaar jecel yahiin ugaadhsiga dagan waxay goosan karaan xitaa marka uu dhaxlo marka hore.
Waa muhiim! Dadka wax soo saarka ah ee khibrada leh waxay kugula talinayaan inay ururiyaan miro miro ah meel u dhow wadada iyo meelaha wax soosaaraya, gaar ahaan meelaha laga soo galo Chernobyl. Xaqiiqdu waxa weeye in xeeladaha xooga leh ee xoogga leh ay keenaan walxaha shucaaca ka yimaada deegaanka.
Bitters waxay leeyihiin noocyo badan oo la mid ah farsamoyaqaannada kale ee llechnikami, markaa way fududahay in la isku kalsoonaado. Si kalsooni leh, dadka wax soo saarka badani waxay ku talinayaan marka ay ururinayaan in ay diirada saaraan xoqida bartamaha daboolka iyo casiir aan midab lahayn oo laga sii daayo qashinka jaban. Si kastaba ha noqotee, kuwan waa calaamado muhiim ah, laakiin si shaki ah ha uga shakinin inaad adigu geliso musqusha aad rabto ee ku jirta baska, ma dhaawici doonto si loo aqoonsado dadka kale. dadka la midka ah:
Boogta Cagaarshow (Lactarius hepaticus) - waxaa loo arkaa mid aan la dabooli karin. Casiirkiisa lakansan waxaa lagu kala soocayaa hoosta jaalaha ah kaas oo u muuqda marka ay la xiriirto oksijiinka. Oo jidhkuna wuxuu la mid yahay khamri ama ha ahaado sumcad.
Milkiil Marsh (Lactarius sphagnei) - wuxuu jecel yahay aagagga ciyaalka ah ee kaymaha dhaadheer.
Milanka Campanic (Lactarius camphoratus) waa mushahar yar oo la cuni karo oo aan caan ahayn sababtoo ah dhadhankiisa gaarka ah. Waxay ka duwan tahay qadhaadh leh carafal ubax qurux badan, tubercle yar oo ku yaal daboolka iyo dheecaan dheeri ah, dheecaan aan caadi ahayn oo caan ah oo dhadhan macaan leh.
Mlechnik (Lactarius theiogalus) - waxay ka duwan tahay juuska caanaha ee caanaha hawada iyo midabka iftiinka ee furka.
Gladysh (Lactarius badiosanguineus) waa miro la miisaami karo oo lagu tilmaamayo dabool khafiif ah oo aan lahayn tubercle oo leh midab casri ah oo casri ah, midab gaaban iyo dhadhan qafiif ah.
Ma taqaanaa? 300 sano ka hor, awowayaasheen waxay soo ururiyeen saddex nooc oo ah boqoshaada: boqoshaada, boqoshaada caanaha iyo caddaan.
Sida laga soo xigtay khabiirada, boqoshaada qadhaadh ah, inkastoo ay leeyihiin dhadhan gaar ah, laakiin qiyaasta qadar yar ayaa faa'iido u leh jirka. Waxaa la tijaabiyey tijaabin in qashirku ku jiro antibiyooti dabiici ah oo xannibaya jeermiska Staphylococcus aureus, iyo sidoo kale ulaha mindhicirka iyo hilibka. Laakiin isticmaalka cunnada, mushahdu waxay ku haboon tahay oo kaliya in la qaado ama la qaado. Iyo si loo baabi'iyo qadhaadh aan fiicnayn, badeecada waa in la qooyay.
Intee in le'eg ayaa la qoynayaa?
Hooyooyinka khibrad leh, kuwaas oo isku diyaarinayay pickles xilliga qaboobaha ee koobab qadhaadh sanado ah, waxay ku talinayaan in ay jaraan caleenta iyo cagaarka isla markiiba kaynta, ka dibna si taxadar leh ugu rid boorsada qaboojiyaha. Markaad guriga joogtid, dalagga oo idil waa in si fiican loo dhaqaa oo loo baaraa waxyeellada. Tijaabooyinka tayada ee la xushay ku shub saddex maalmood oo biyo qabow (iyada oo la bixinayo diyaarinta dheeraad ah oo lagu fulin doono habka kulul).
Waxaa muhiim ah in si joogto ah u daadin dareeraha, maadaama ay ku fidsan tahay casiirka caanaha ee gubanaya. Waxaa lagula talinayaa inaad tan sameyso ugu yaraan 2-3 jeer. Badanaa waxaad badashaa biyaha, sida ugu wanaagsan. Qalabka ka dib, qalabka ceeriin ayaa joojin doona qadhaadh. Haddii aad qorsheyneyso inaad milixda ku darto hab qabow, qoyaanku waa inuu socdaa ilaa 6 maalmood.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan goosashada boqoshaada: pickling (boqoshaada, boqoshaada), pickling (boletus, ryadovki, boqoshaada caanaha, boqoshaada, chanterelles), caviar laga bilaabo agaric malab ah.
Kadib markaad barareysid boqoshaada, mar labaad raaci, lugaha gaaban ilaa 2 sentimitir waxaadna kala sooceysaa sida ay u kala weyn yihiin. Foomkan, qadhaadh qiyaastii 30 daqiiqadood karkari kuleylka hooseeya ee biyaha cusbada leh. Ha ilaawin inaad si joogto ah u walaaqdo oo uga saarto xumbo karkaraya. Markaas maraq waa in la qaboojiyo, ka dibna boqoshaada lagu tuuri karaa Colander si ay u daadiyaan biyaha xad dhaafka ah. Dhanka kale, waxaad samayn kartaa sterilization of gasacadaha. Waxaa fiican inaad tan ku sameyso foornada, inaad hubiso in aad weelka qallalan ku dhex jirto. Baaldiyada la dhalaaliyay, gasacadaha iyo gasacadaha ayaa sidoo kale ku haboon jooniska. Ka dib markaad dhamaystirto dhammaan nadiifinta, caleemaha, sidoo kale caleemaha currant madow, malayga, basbaaska madow iyo macaan, xumbo, iyo dill la jarjarey ayaa la dhigayaa xagga hoose ee weelka la diyaariyey. Mushrooms ku rushaysaa sunta jarjaran iyo cusbo. Weelasha waxay ka buuxsamaan qadhaadh iyo saliida gabbaldayaha waxaa laga shubay kor ka kore ama budada khardraa waa la shubay.
Qiyaasta kalluunka boqoshaada la karkariyey ee badeecadaha waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo heerka caadiga ah:
50 ml oo saliid ah oo khudradeed;
maaddooyinka kale - dhadhamin.
Weelasha diyaarsan waxay ku xiran yihiin xargaha waxaana loo diraa meel qabow ah 50 cisho oo loogu talagalay dharka. Markaad isticmaasho enamelware, hubi inaad isticmaasho culeyska si uu boqoshaada marwalba u yahay brine. Waxaa lagu dhajiyaa dusha sare ee feyladda.
Waa muhiim! Saliidku waa inaan laga tagin heerkul ka sarreeya +7 ° C Haddii kale wax soo saarku wuxuu dhadhamin doonaa muddo gaaban.
Video: marinating kiciyay
Iyadoo aan loo eegin habka diyaarinta, qoyaan aad u qoyan ayaa noqon doona mid xiiso leh miis kasta. Waxyaabaha ugu muhiimsan - si habboon u socdaan kaynta, si sax ah u aqoonsanayaan likaha, iyo si fiican u qoyso geedi socodka karinta. Waxan rajaynaynaa in maqaalkani kaa caawiyo.